Ziziphi iingxaki zakho zokwenza iHo-in One kwiGalofu?
Abanye abantu babonakala benza ii-aces eziseleyo kwaye zichanekile. Abanye abagadi begolfu baya kuzo zonke izinto zokugaluba ngaphandle komnye. Ngaba kunzima kangakanani ukwenza imbobo-inye ? Ziyintoni na iingxaki? Makhe sijonge kwiingxaki zesiseko "esisisiseko" kunye kunye neziganeko ezincinci.
(Qaphela kwimithombo: Ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela kumbhalo, imithombo yembalo yilezi zibalo zeBhoston University mathmatician Francis Scheid, Ph.D., egameni leGolf Digest ; iikhenketho.)
I-Standard Hole-In-One Izibalulo ze-Amateurs kunye nePros
Ziziphi iingxaki zaso naziphi na i-golfer ezinikezelweyo eziphuma kwi-tee kwindawo engama -3 ? Isiqalo sakho esisodwa, ngamanye amagama (ngokuchasene nezinye zeemeko ezingavamile esiza kuzibona ngezantsi).
Ixhomekeka ngokukodwa kwindlela enhle ngayo i-golfer. Ukwenza i-ace iquka inqanaba elinzima lenhlanhla, kodwa kungcono ukuba ukhona, ekugqibeleni uyakufumana enye (kuba ushaya amaninzi ngaphezulu kwibala, iibhola ezininzi kufuphi nomngxuma).
Iziganeko ze-amateur ezenza umngxuma-in-one: 12,500 ukuya ku-1
Iziphumo zomntu okhubazekayo owenza umgodi-ngeyodwa: 5,000 ukuya ku-1
Iziganeko ze-golfer eziyingcali ezenza i-ace: 2,500 ukuya ku-1
Iziphumo zegolfer ephakathi kwi-yard 200 nge-3: 150,000 ukuya ku-1
Iziphumo zokwenza i-Hole-in One ngexesha lakho lokuPhila
Ziziphi iingxaki zokurekhoda ubuncinane i-ace enye kwixesha lokudlala?
Ukuba unesifo esincinci kwaye udlala u-1000 amajikelezo ebomini bakho (umyinge wama-25 ejikeleziweyo kwiminyaka engama-40), unamava e-20 epesenti yokwenza ubuncinane omnye umgodi ngomnye.
Kufuneka udlale ngaphi ujikelezo ukuze wenze iimeko ezintle-1: 1? Ukuba ungumntu okhubazekayo odlala iinqwelo ezi-5000 (iinqwelo eziyi-100 ngonyaka iminyaka engama-50), unayo-imali ukuba ube ne-ace eyodwa.
(Ngokusobala, iziphumo ziphezulu kakhulu kubagadi begalufu abaqhelekileyo.)
I-Hole-in-One Iziphumo zeQela labaGoli
Kuninzi, ogqithiseleyo kunokuba enye i-golfer eyenza i-ace enye ngexesha lokujikeleza kwegalufu iigolfu ezimbini ezivela kwiqela elifanayo ukwenza ii-aces ngexesha elifanayo.
Iziganeko zezigulane ezimbini kwiqela elifanayo lezine ezenza imingxuma-enye-nye nayiphi na indawo ngexesha elijikelezayo: 1.3 million ukuya ku-1
Iziganeko zezigulane ezimbini kwiqela elifanayo labane kunye nesango elifanayo ngexesha elifanayo: i-26 yezigidi ukuya ku-1
Iingxaki zibhetele kangcono, nangona kunjalo, kwintsimi yegalufa ephakathi. Ngokutsho kwe-US Hole In One (enika i-inshurensi engena-in-one), kunye nentsimi ye-amateurs eyi-100 kwiklasi yegalufa eneempango ezine-3, kukho ithuba eli-1 ukuya kwe-32 umntu oza kwenza i-ace eso siganeko. (Iziganeko zengxuma-enye-nye ngexesha leentsuku ezine zomcimbi we- PGA Tour , ngokwendlela efanayo, ngu-1: 1.)
Ngaphezulu kwee-Aces eziqhelekileyo kunye ne-Hole-in-One
Sixelele amabali ama-aces amangalisayo apha, kwaye, ngokuqinisekileyo, unokufumana amabali amaninzi ngaphandle apha kwiwebhu ngokubanzi. I-Holes-in-one engavamile, iimpawu zabo kufuneka zibe yenkwenkwezi.
Ngomnyaka we-1971 iNyukelo yaseYurophu yayimisa imingxuma ye-back-to-back (enye yayo yayingum-par-4) kwisiganeko sokutyelela . Iziphumo: izigidi ezingama-50 ukuya kwi-1.
Indoda yedoda kunye nomfazi wayibamba loo mgobo onjalo kwimigodi yokubuyela emuva. Izibizo: Ngubani owaziyo! Nqabile kangako (mhlawumbi ayikwazi ukuba) ibalwa.
I-golfer yokuqala eyayingakaze ibenze i-birdied yenze imingxuma emibini kwimigodi emihlanu. Iziphumo: Phuma apha ngelo ntetho ephosa! (Kodwa kwenzeka ngokwenene - umqeqeshi uRick Smith wabona bobabini.) Iingxaki zomdlali omnye ezenza ii-aces ezimbini kwinqanaba elifanayo zibalwe kwi-67 million-to-1.
Ngo- 1989 i-US Open , inzuzo emine yenze imimandla enye (No. 6) ngexesha elifanayo (yesibini). Iziganeko: Izigidi ezi-1.6 ukuya kwi-1 (ezincinci kunokuba ungalindela kuba aba bantu bahle kakhulu).
Bona kwakhona: Ziziphi iingxaki zokwenza ukhozi oluphinda kabini ?
Iingcebiso kunye neengcebiso zokukunceda ube yi-Cheerleader
Ukusebenzisa i-Shoe Goo Ukulungisa ii-Skate Shoes
I-Tattoos ze-Ski kunye neZingcebiso
Imbali Yembali yobuGcisa: Ukususela kwiMandulo ukuya kobuGcisa bemihla ngemihla
U-Antoine-Laurent Lavoisier Biography
Ukubukela ibhola ngokusebenzisa amehlo oQeqesho
Uluhlu lwe-Ozone Layer